हिमाल खबरपत्रिका | खाडल घटाउने नीति
खाडल घटाउने नीति
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजनको पाटोमा खासै नयाँपन नदिए पनि कर प्रणालीको पुनर्संरचनामा भने आफ्नो छाप देखाउन खोजेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको कर प्रणालीलाई उनकै शब्दमा ‘प्रगतिशील र समन्यायिक’ बनाउन नीतिगत परिवर्तनहरू गरेका छन् । बजार नियमनमा ‘कडा रवैया’ देखाउने उनको स्वभाव कर प्रणालीको पुनर्संरचनामा पनि झ्ल्किएको छ । उनले मूलतः चार किसिमका सुधार चाहेका छन्– प्रगतिशील कर प्रणाली, बजारको पारदर्शिता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र शक्तिशाली नियामक ।
कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट वार्षिक रु.७ लाख कमाउनेलाई बढी लाभ र रु.२५ लाख आम्दानी गर्नेलाई सबभन्दा बढी घाटा हुनेछ । त्यसभन्दा बढी कमाउनेका लागि भने यसअघिको तुलनामा अतिरिक्त करको भार क्रमशः कम हुँदै जानेछ । वार्षिक रु.४ लाख कमाउने विवाहित र साढे ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अविवाहितले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिरे पुग्छ । त्यसभन्दा बढी कमाउनेले भने आयकर तिर्नुपर्छ । अब सरकारले रु.१ लाख करयोग्य आय गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लगाउने भएको छ ।
त्यसभन्दा बढी आम्दानीमा थप रु.२ लाखको लागि २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । रु.७ लाखभन्दा बढीको आयमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक आय रु.२० लाखभन्दा बढी हुनेले अतिरिक्त २० प्रतिशत कर जोडेर तिर्नुपर्छ । यसो गर्दा रु.२० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । यसअघि रु.२५ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा अतिरिक्त करसहित ३५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालमा भने अप्रत्यक्ष करको दायरा बढाउँदै लैजाने प्रयास भएको छ । भ्याट फिर्ता गर्ने र भन्सार सुविधा दिने प्रावधानहरू हटाउँदा अप्रत्यक्ष कर अझ् बढ्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “नयाँ व्यवस्थाहरूले थुपै्र उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउने छन् ।”
कोही व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्न खोजे विभागले राहदानी लगायत कागजपत्र कब्जामा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार विवरण माग्न र त्यसको अनुसन्धान गर्न विभाग स्वतन्त्र भएको छ । जुनसुकै कार्यालय, संघ, संस्था, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था र धितोपत्र बजारको कारोबारको विवरण विभागले माग्न सक्छ । कानूनले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार पनि विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको अधिकारीलाई दिएको छ ।
विगतमा वित्तीय सूचनामा पनि गोपनीयताको हक हुने भन्दै त्यस्ता विवरण उपलब्ध नगराउने परिपाटीले राजस्व अनुसन्धानमा समस्या पारेको थियो । अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले व्यवसायीहरूले राजस्व प्रशासनलाई बेग्लै र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा बेग्लै कारोबार विवरण बुझएर कर छली गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्न जरूरी भएको बताएका छन् । १६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान वित्तीय गोपनीयताभन्दा माथि बसेर गरिने बताए ।
राजस्व प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र होइन, राजस्व प्रहरी नै गठन गरेर बजार अनुगमन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । बजारलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्ने हो भने राजस्व वृद्धिको असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ । यसले न्यून आय भएकालाई समस्यामा पार्छ भने सँगसँगै मुद्रास्फीतिको सरकारी प्रक्षेपणले ‘हावा’ खान सक्छ । त्योभन्दा ठूलो जोखिम चाहिं जतिसक्दो घटाउन खोजिएको अनौपचारिक व्यापार अझ्ै झङ्गिने हो कि भन्नेमा हुन्छ । खासगरी कृषिजन्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने भारतसँगको खुला सीमाबाट अनौपचारिक व्यापार बढ्न सक्छ । पूँजी पलायन गर्नेदेखि नेपालभित्रको उत्पादकत्व मार्नेसम्मको यस्तो अवैध व्यापार घटाउन सरकार कठोर हुनैपर्छ ।
व्यक्तिगत आयकर र अप्रत्यक्ष करका व्यवस्थाहरूलाई थप प्रगतिशील बनाएको सरकारले आय करकै अर्को पक्ष पूँजीगत लाभकरलाई भने खासै महŒव दिएन । जबकि, धनी र गरीबबीचको खाडल बढिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पूँजीगत लाभकरलाई बढी प्राथमिकता दिन थालिएको छ । धनी मुलुकहरूले आयकरको निकै ठूलो हिस्सा पूँजीगत लाभकरबाट उठाउन थालेका छन् । पछिल्लो दशकमा धनी र गरीबबीचको आय असमानता चुलिएको भन्दै गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वभरका सरकारहरूलाई भ्रष्टाचार घटाउन र पूँजीगत लाभकर बढाउन आह्वान गरेको थियो ।
नेपालमा माओवादी द्वन्द्वसँगै बढेको घरजग्गा कारोबारबाट एउटा वर्गले अस्वाभाविक पूँजीगत लाभ प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर छँदा घरजग्गा कारोबारमा आएको तीव्र वृद्धि (बबल) नियन्त्रण गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामाथि लगाम कसेका थिए । त्यसरी स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा आएको भारी वृद्धिबाट लाभ लिनेहरूलाई उच्चतम कर लगाउन भने उनी चुकेका छन् । राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “व्यक्तिगत आयकरलाई सुधार गरे पनि पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था मिलाउन उहाँ चुक्नुभयो ।”
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कर पुनर्संरचनाको लागि टोली नै बनाएर अध्ययन गरिए पनि समय पर्याप्त नपाएकाले अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । अहिलेलाई सकिने जति क्षेत्र हेरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, यस पटक व्यक्तिगत आयकरलाई बढी सुधार गर्ने, संस्थागत आयकरलाई केही सुधार गर्ने र उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुने कञ्जुमर ट्याक्स परिमार्जनमा ध्यान दिने काम भयो । आगामी वर्षहरूमा पूँजीगत लाभकरबारे थप अध्ययन गरेर सुधार योजना आउन सक्ने एक जना सहसचिव बताउँछन् । अर्थ मन्त्रीले बजेटमै करका दरहरू सरकारले समय–समयमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । संसदले यी आर्थिक विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित गरे प्रस्तावित करका दरमाथि पुनर्विचार गर्न अर्को जेठ १५ कुर्नु पर्दैन ।
१ नयाँ कर नीतिले उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति लिएन । कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीलाई चित्त बुझेन भने त्यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित विवादको शीघ्र समाधान गर्ने बाटो बजेटले देखाओस् भन्नेमा हाम्रो सबभन्दा ठूलो अपेक्षा थियो । त्यो सम्बोधन नै भएन ।्